Ahoana no To tsy mody Fa Lamasinina Trip Across Italia | Save A Train
Home > Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina > Ahoana no To tsy mody Fa Lamasinina Trip Across Italia
aina, mijery stylish ary tsy manana entana mavesatra be loatra. Toy izao ny fomba entana ho lamasinina lavitra manerana an'i Italia.
Ahoana no entana ny fiaran-dalamby – Clothing, kiraro, ary Accessories
Rahoviana Nandeha fiarandalamby amin'ny alalan'ny Italia, ianao te-hitandrina ny lamaody lalao matanjaka. Fa raha tokony ho mpamatsy ny toerana tena akanjo rehetra, misafidy stylishly, manapaka tsara soratra ka accessorize amin'ny fanambarana feno fahasahiana farantsa. Ohatra, entana ho lamasinina tsara lavitra mainty manify pataloha jeans, t-shirt sy ny Polo hatony mijery Chic irery. Fa ny fitenenana mahazatra andro Jereo, Sneakers amin'ny mpivady sy ny denim palitao. Amin'ny alina, manampy ara-fisaka sy tapa-fanambarana firavaka.
Ataovy azo antoka ny entana lehibe folara. Ary koa ny manao ny tsara fanahy, raha izany nangatsiaka, na hanampy flair ny akanjo, folara lehibe dia afaka manao toy ny bodofotsy rehefa miala voly amin'ny mitaingina fiaran-dalamby. Azonao atao mihitsy aza ny mampiasa azy io ho toy ny fitsangatsanganana bodofotsy na vonjimaika tora-pasika lamba famaohana.
Raha ny kitapo, soroka iray mitondra kitapo lehibe izay afaka mihazona fiantsenana na tora-pasika tena ilaina. Ianao no mila, na ny kitapo-body hazo fijaliana kitapom-batsy ho andro-to-andro ny hetsika sy ny fizahan-tany kely iray, ofisialy clutch for hariva, toy izany no mety rehefa entana ho lamasinina lavitra.
Toiletries, beauty entana, sy ny fanafody
Fa nandeha fiaran-dalamby, ilaina na tsia Travel-salantsalany mividy ny entana ho lamasinina lavitra rehetra, ny hatsaran-tarehinao ny Travel vokatra na fitoeran-javatra dia afaka mameno anareo tsy miaraka amin'ny vokatra. Raha ny diany Lava noho ny herinandro na roa, Diniho mividy shampoo bebe kokoa sy ny ranonorana mandritra ny diany gel, fa tsy nitondra manontolo salantsalany fitoeran-javatra ao an-kitapo – manampy lanja ary maka toerana malalaka. Azonao atao koa ny mangataka santionany amin'ny hatsaran-tarehy eo an-toerana mifanohitra. Matetika izy ireo dia ho afaka ny manome anao kely dikanteny rehetra ilaina, toy ny mascara, serum aman'alina fanosotra.
Raha ny makiazy, alàny ny mahazatra teo noho ny diany. A tinted moisturizer, ny mena izay afaka avo roa heny toy ny eyeshadow sy ny mascara hiaro anao selfie-vonona. Azonao atao ihany koa ny mitondra miaraka amin'ny multi-tanjona vokatra toy ny vaseline na valo ora fanosotra, izay mety ho molotra balsama, dia miloko na mahery vaika moisturizer.
Aza adino ny levitra fanafody, ary koa ny vonjy taitra kely maika. Painkillers, maloiloy fanafody sy ny tarika-SIDA no tsy handray be loatra toerana, ary raha toa ka mila na inona na inona voafaritra kokoa, ianao ho azony fantarina akory amin'ny Italiana levitra na ny zava-mahadomelina fivarotana.
Fialam-boly, elektronika, sy ny antontan-taratasy
A lalamby dia tonga lafatra fotoana manatratra amin'ny famakian-teny, na izany aza, boky no mibahan-toerana sy ny mavesatra. A handrehitra, takelaka na finday avo lenta amin'ny famakiana App lehibe fomba teo an-boay raha mbola mamaky boky ny fitandremana ny entana fahazavana ka ho azo antoka ny entana ho lamasinina hamandrika ny takelaka. Azonao atao ihany koa ny misintona audiobooks sy mankafy ny fomba fijery avy amin'ny varavarankely raha mihaino ny tantara.
Miaraka amin'ny antontan-taratasy ilaina ara-batana Travel, Azonao atao ihany koa ny maka sary na ny antontan-taratasy manan-danja scan sy ny mailaka dika mitovy ny tenanao. toy izany, raha ny finday avo lenta na ny takelaka dia tsy misy, dia afaka miditra ao an-mailaka lavitra, ary miditra ny antontan-taratasy ilainao.
Bruxelles ho Bonn Lamasinina
Antwerp ho any Bonn Lamasinina
Halle any Bonn Lamasinina
Ghent ho any Bonn Lamasinina
Rehefa nandray ny levitra fiaran-dalamby nankany, ianao no mila mitadidy ny entana ho lamasinina rehetra tena ilaina ao anaty kitapo kely ao an-kitapo, na kitapo-body hazo fijaliana. Ampidiro toiletries fototra toy ny borosy nify ary apetaho, hairbrush na comb, endrika mamafa, ary moisturizer. Raha toa ianao fanazavana natory, mety te-hanampy earplugs sy ny saron-tava ny torimaso ny alina kitapo.
Ho maivana ihany koa ny mila hitafy ny akanjo mandry, na raha tianao, akanjo aina dia afaka hatory ao, toy ny lalana pataloha na ny leggings sy ny akanjo, na ny ambony tanky amin'ny fanohanana miafina. Aza adino ny lehibe folara, izay afaka mihodina ka ampiasaina ho toy ny ondana na bodofotsy fanampiny.
Vonona ny entana ho lavitra na boky lamasinina ny lamasinina nandeha manodidina Italia? Ho azo antoka izay vangianao Save A Train ny toerana tranonkala ho an'ny famandrihana tapakila ho an'ny fiaran-dalamby mandeha Eoropeana amin'ny vidin-javatra tsara indrindra. Get trandrahana!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: Sokajy://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/how-to-pack-for-a-train-trip-across-italy/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / andehilahy ny / en na / fiteny azy sy ny maro hafa.
#entana fiaran-dalamby soso-kevitra traveltips